Monday September 25, 2017 - 11:57:23 in Wararka by Super Admin
Maamulka Kurdistan ee caasimaddiisu tahay magaalada Arbiil ayaa ku dhawaaqay in afti qaadistu ay bilaabatay islamarkaana shacabka Kurdiyiinta ay ka tashan doonaan masiirkooda siyaasadeed.
Dowladaha Ciraaq, iiraan iyo Turkiga ayaa si adag ugasoo horjeestay qorshahan uu qaaday maamulka Kurdiyiinta.
R/wasaaraha shiicada Ciraaq Xeydar Alcabaadi ayaa kalimad uu jeediyay ku sheegay in tallaab melleteri ay qaadi doonaan haddii ay dhacdo Afti dowlad u ogolaanaysa dadka Kurdiyiinta ee Waqooyiga Ciraaq dega.
Alcabaadi ayaa ugu baaqay Mascuud Barazaani Hoggaamiyaha Maamulka Kurdistaan in uu ka laabto qorshahan uu kukala qeybinayo dalweynaha Ciraaq, dowladda Turkiga ayaa iyana si kulul uga hadashay Aftida waxayna ku hanjabtay faragelin meleteri.
Dowladda Turkiga waxay ka cabsi qabtaa in haddii ay dowlad noqdaan Kurdiyiinta ay xoogeystaan Jabhadaha gooni ugoosadka Kurdiyiinta ee caanka ku ah dagaalka ay kula jiraan Nidaamka ka arrimiya Turkiga.
Dowladda iiraan ayaa iyana ku dhawaaqday in ay xirtay xuduudka ay la wadaagto gobolka Kurdistaan waxayna bilaawday dhoollatus melleteri oo ay uga digayso afti qaadista, qowmiyadda Kurdiyiinta ayaa ah qowmiyadda ugu ballaaran caalamka ee aan dowlad laheyn.
Kurdiyiinta ayaa dega gobollada xuduudaha kulaala ee wadamada Ciraaq,iiraan,Suuriya iyo Turkiga, kooxo calmaaniyiin diin laawaayaal ah oo kasoo jeeda Qowmiyadda Kurdida ayaa majaraha u haaya mashruuca lagu raadinayo dowlad kurdi ah oo xiriir dhow laleh reer galbeedka iyo Yahuuda Sahyuuniyadda.
Dowladaha Ruushka, imaarataka Carabta iyo Yahuudda ayaa la sheegay in ay taageersanyihiin qorshaha ay Kurdiyiinta Ciraaq ku noqonayaan dal madax banaan, maleeshiyaad katirsan xukuumadda shiicada Ciraaq ayaa iyana la sheegay in ay kulaalayaan magaalada Hodonka ku ah shidaalka ee Kirkuuk.